LG G3 ကို root မလုပ်ဘဲမသေဘဲသေအောင်ကြိုးစားနည်း | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, LG, လဲ tutorial
အသုံးပြုသူများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသင်ကြားပေးလိုပါသည် အကောင်းဆုံး Android ဖွံ့ဖြိုးမှုဖိုရမ်မှ ဘုရားသခင်မှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိကြောင်းကို၎င်း၊ XDA ဖိုရမ်။ ပုံ LG G3 မှာ root permissions ကိုရယူပါ terminal ကိုအားလုံးမော်ဒယ်များနှင့်မူကွဲ၌တည်၏။
Terminal သို့သူတို့လုပ်သမျှသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းသတိရရန် LG G3 operating system မှမည်သည့်ဖိုင်မဆို ငါတို့လိုပဲပြုလုပ်နှင့်ဖျက်သိမ်းရန် ကျနော်တို့တရားဝင်ထုတ်ကုန်အာမခံဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ယခုသင်သိ, ရှေ့သို့ရွေ့လျား၏တာဝန်သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
Este LG G3 မှာ root လုပ်ဖို့သင်ခန်းစာ ၎င်းသည်ကိုရီးယားမော်ဒယ်လ်မှ terminal ၏လက်ရှိမော်ဒယ်များအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သင့်သည် F400K, နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်အထိ D855 Sprint (LS990), Verizon (VS985)၊ AT & T (D850), T-Mobile (D851) နှင့်ကနေဒါ (D852) စသည့်၎င်း၏မျိုးကွဲအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။
2 LG G3 တွင် Root လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ
3 LG G3 မှာ root လုပ်ဖို့နည်းလမ်း
ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် LG G3 အတွက်တရား ၀ င် drivers တွေကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ ဒီတူညီတဲ့ link ကိုမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည်၊ LG G3 ကို၎င်း၏ USB ကြိုးမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Windows ကိုသူကိုယ်တိုင်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
ယခုငါတို့ menu ကိုသွားရပါမည် LG G3 ချိန်ညှိချက်များ ဖုန်း / ဆော့ (ဖ်) ဝဲအချက်အလက်အကြောင်း y တည်ဆောက်မှုနံပါတ်ကိုပြောသောမျဉ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ခုနစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ, ဒီနှင့်အတူကျွန်တော်တစ် ဦး enabled ပါလိမ့်မည် အဆင့်မြင့် options များဟုခေါ်တွင် setting များကိုအသစ်အပိုင်း USB debugging ကိုသက်ဝင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ရမည်။ ဒီလိုင်းတွေကိုအထက်မှာငါမြှုပ်ထားသောဗွီဒီယိုထဲမှာမင်းကိုအမြင်အာရုံအကြောင်းရှင်းပြပေးမယ့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုထားခဲ့တယ်။
LG G3 တွင် Root လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ
LG G3 တွင် root permissions ရရှိရန်လိုအပ်သောဖိုင်များသည်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည် compressed file ကို ZIP format နဲ့ချထားပြီးဒီလင့်ခ်ကနေကူးယူပါလိမ့်မယ် အရာငါတို့သည်သွားကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆို unzip လုပ်ပါပိုမိုကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုရှိရန် Windows Desktop ပေါ်တွင်၎င်းကို unzip လုပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။
အခုတော့အဲ့ဒါပဲကျန်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LG G3 ကိုချိတ်ဆက်ပါ ၎င်း၏လက်ရှိမူကွဲမဆို USB ကြိုးမှတဆင့် ကွန်ပျူတာကိုသွားပြီးဒီအဆင့်တွေကိုအတိအကျလိုက်နာပါ။
LG G3 မှာ root လုပ်ဖို့နည်းလမ်း
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင် download လုပ်ထားသော ZIP ဖိုင်ကို unzipped လုပ်ပြီးလျှင်၎င်းဖိုင်တွဲကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူပြီး၎င်းနှင့်ဆင်တူသည့်အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယင်းနှင့်အတူ LG G3 သည်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်ဖိုင်ကိုနှိပ်ပါ run.bat ပါ MS-Dos command ၀ င်းဒိုးကိုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်၍ မည်သည့်သော့ကိုမဆိုနှိပ်ရမည်။
ယခုငါတို့ LG G3 ဖြစ်သင့်သည် recovery mode ထဲမှာသူ့ဟာသူ reboot လုပ်ပါ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။ ဒီ mode ကိုရောက်တာနဲ့ volume button ကိုသုံးပြီး option ကိုသွားပါ adb ထံမှ Aply update ကို အရာကျွန်တော် button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုပါလိမ့်မယ် စွမ်းအား.
Command ၀ င်းဒိုးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ရလိမ့်မည် ဆက်လုပ်ရန်သော့ချက်။ ကျနော်တို့ကလုပ်ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်း LG G3 rooting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီ, ဘယ်အချိန်မှာငါတို့ option ကိုသွားသဖြင့်ပြန်လည်စတင်ရန်ရှိသည် ယခု reboot system ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတော့အိတ်ကိုယ်တိုင်ကမှ။
၎င်းသည်ပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့သွားပြီးဖြစ်သည် မည်သည့် superuser အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမဆို download လုပ်ပါ SuperSu (သို့) SuperUser လိုမျိုး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 မှာဗားရှင်းတွေအားလုံးကို root လုပ်နည်း
သင်နောက်ဆုံးသတင်းများ x ota လက်လွတ်?
root ဖြင့်သင် ဆက်၍ မွမ်းမံနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင် custom recovery တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပါက ota မှတဆင့်မွမ်းမံနိုင်မည်သာမကဖုန်းကိုအုတ်ခဲဖြင့်လည်းဖြုတ်နိုင်သည်။
အဲလက်စ် Omegarojo ဟုသူကပြောသည်
Diego Greetings, ထုံးစံအတိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါ LG G3 သည်ပိတ်မိနေသည်ဟုသင်မှတ်ချက်ချသောကြောင့်ဖြစ်သည်
မင်းက ClockworkMod ကိုဆိုလိုတာလား ဘာကြောင့်အုတ်ခဲရောင်လဲဆိုတာကိုသင်ရှင်းပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Alex Omegarojo အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါဖြစ်စဉ်ကိုပြီးဆုံးသွားပြီးသည့်နောက်တွင် LG ဖန်သားပြင်သည်အောက်ပါအချက်များကိုဖော်ပြသည် -
"E: ဖိုင်တစ်ခုလုံး၏လက်မှတ်ကိုအတည်မပြုနိုင်ပါ။ အီး - လက်မှတ်အတည်ပြုခြင်းမအောင်မြင်ပါ။ ဤပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Good Renner သည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး၎င်းအမျိုးအစားသည်ထိုဗားရှင်းနှင့်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါမှာအတူတူပင်ပြproblemနာရှိခဲ့ပြီးအခြားနည်းကို သုံး၍ ဖြေရှင်းခဲ့တယ် http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/root-root-lg-g3-easily-purpledrake-lite-t2821000
Pablo Cava သို့ပြန်ပြောပါ
Lollipop 5.0 သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် Lollipop3ပါသော LG G855 D5.0 ရှိသည်
LINKS Droped ငါ LG3 ကိုမွမ်းမံချင်တယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖိုင်များကိုဘယ်နေရာမှာရနိုင်မလဲ။
Android အတွက် multiWifi နဲ့အတူ Wifi ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုဘယ်လိုစီမံရမလဲ
Xposed [Root] [4.3+] ဖြင့်သင်၏ Android သို့ Blur အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့သက်ဝင်စေရမည်နည်း။